Friday August 04, 2017 - 18:07:29
25 jirkan ayaa noqday laacibka ugu qaalisan caalamka, rikoorkaasi oo uu haystay Paul Pogba oo u dheela Manchester United. Neymar ayaa sanadkii qaadan doona lacag dhan 40.7 milyan oo Pound ka hor inta aan canshuurta laga jarin.
Tababaraha kooxda Barca, Ernesto Valverde, ayaa Arbacadii u ogolaaday Neymar inuu mustaqbalkiisa go’aan ka gaaro, waxaana markaa ka dib bilowday hadal-haynta ah inuu ku biirayo kooxda PSG.
Neymar ayaa la sheegay inuu yahay laacibka keliya ee lacag ka badan tan mushaarkiisa ka hela xayaysiinta uu sameeyo. Shirkadaha uu xayaysiinta u sameeyo ayaa waxaa ka mid ah Nike, Gillette iyo Panasoni.
Kooxda Chelsea Oo Caawa Cup-ka FA-ga Looga Qaaday Rigooreyaal
Degmada Dhahar Oo Siweyn Farxad Looga Muujiyay Kadib Guushii Xulka Haylaand Ay Ka Gareen Kooxda G/Mudug